गोरखा–मनकामना पदयात्रा जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा–मनकामना पदयात्रा जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन्
Published On : २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १०:०७
गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म आन्तरिक भ्रमण बर्ष मनाउँदै छ । संघीय सरकारले पनि आउँदो बर्ष २०२० लाई नेपाल भ्रमणबर्षको रुपमा मनाउँदैछ ।
नेपालको पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले भ्रमण बर्ष मनाउन लागिएको हो । तर गोरखामा यसको तयारी खासै पाइँदैन । बल्लतल्ल रोटरी क्लव अफ गोरखाले एउटा कार्यक्रम गर्न लागेको छ ः गोरखा–मनकामना पदयात्रा कार्यक्रम । मनकामना आएका पर्यटकलाई गोरखा बजारसम्म पदयात्रा गराउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । सो पदमार्गका लागि आजभन्दा करिब १० बर्षअघि(बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा) ९० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । त्यति ठूलो परिमाणको बजेट बिनियोजन गर्दा पनि काम परिणामसुन्य नै भयो ।
जे होस्, सो पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न सकेमा भविष्यमा समेत पदयात्रु(पर्यटक) पाउन सक्ने सम्भावना छ ।
यो पदयात्रा मात्र होइन, यो जस्तै अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्न यस्तै रचनात्मक काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र पर्यटकको संख्या बढ्छ, पर्यटन विकास हुन्छ । अन्यथा भाषणमा मात्र पर्यटन विकास भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुको औचित्य रहदैन । उपल्लोकोट पदयात्रा तथा अन्य विकल्पहरु पनि खोज्नुपर्छ ।